पछिल्लो १५ दिनयता दैनिक कोरोना संक्रमण दर घट्दै :: Setopati
पछिल्लो १५ दिनयता दैनिक कोरोना संक्रमण दर घट्दै
विवेक राई काठमाडौं, भदौ ८
पछिल्लो १५ दिनयता कोरोना भाइरसको दैनिक संक्रमण दर निरन्तर घट्न थालेको छ।
हिजो (सोमबार) कुल ११ हजार ३२६ जनाको परीक्षण गरिएकोमा जम्मा १५.९० प्रतिशतमा संक्रमण पोजेटिभ देखिएको थियो। जुन पछिल्लो महिनायताकै कम संक्रमण दर हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो १५ दिनमा कुल परीक्षण गरिएकामध्ये १९ प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको छ। जुन अघिल्लो १५ दिनको तुलनामा तीन प्रतिशतले कमी हो।
साथै भदौ ३ गतेदेखि भने दैनिक संक्रमण दर नै निरन्तर घट्न थालेको छ। भदौ ३ गते १९ प्रतिशतमा संक्रमण देखिएकोमा भदौ ४ गते १७ प्रतिशत र त्यसयता भने दैनिक औसत १५ प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको छ।
पछिल्लो १५ दिनमा कोरोना संक्रमण दर (प्रतिशतमा)
साउन २५ २२
साउन २६ २६
साउन २७ २१
साउन २८ २१
साउन २९ २१
साउन ३० १९
साउन ३१ १८
साउन ३२ २२
भदौ १ १८
भदौ २ २०
भदौ ३ १९
भदौ ४ १७
भदौ ५ १६
भदौ ६ १५
भदौ ७ १६
पछिल्लो १५ दिनयता संक्रमण दर निरन्तर घट्नु राम्रो संकेत रहेको भन्दै तत्काल संक्रमणको अवस्था भयावह नहुने देखिएको संक्रमण रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन्।
'पछिल्ला दिनमा संक्रमण दर ओरालो लाग्नु शुभ संकेत हो। अब तत्काल दोस्रो लहरजस्तै भयावह स्थिति हुने सम्भावना कम देख्छु,' उनले भने।
डा. पुनका कुरालाई आधार मान्ने हो भने जसरी पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमण दर घट्न थालेको छ, त्यसले संक्रमण विस्तारै शिथिल हुँदै गएको भनेर बुझ्नुपर्छ। जबकि असारको अन्तिमतिर संक्रमण पुनः ह्वात्तै बढ्न थाल्दा कतिपय स्वास्थ्य अधिकारीहरूले दोस्रो लहरकै जस्तो भयावह स्थिति आउनसक्ने चेतावनी दिएका थिए। हुन पनि त्यसअघि दैनिक २ हजार बढीमा संक्रमण नदेखिएको स्थितिमा एकैदिन झन्डै पाँच हजार जनालाई समेत संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
त्यसरी संक्रमण दर लगालग बढ्न थालेपछि सरकारले समेत तेस्रो लहरको जोखिम रहेको भन्दै पटक-पटक सूचना जारी गरेको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशमार्फत् देशभरका अस्पतालहरूलाई अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
काठमाडौं उपत्यकाकै हकमा संक्रमण बढेको भन्दै अघिल्लो साता राति ८ बजेदेखि निजी तथा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो। तर आज तीन वटै जिल्लाका सिडिओको बैठकले राति पनि निजी तथा सार्वजनिक सवारीलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ।
पछिल्लो समय संक्रमण दर घट्नुमा डा. पुन केही कारणहरू औंल्याउँछन्।
पहिलो त धेरै मानिसहरू यसअघि नै संक्रमित भइसकेकाले पुनः संक्रमित नभएको हुनसक्ने उनी बताउँछन्।
'जुन अहिले डेल्टा भेरियन्ट फैलिरहेको छ त्यसले पनि एकै समयमा एकै व्यक्तिलाई पटक-पटक संक्रमण गर्दैन। त्यसैले यसअघि नै धेरै मानिसहरू संक्रमित भइसकेकाले पुनः संक्रमण नभएको हुनसक्छ,' उनले भने, 'तर त्यसको लागि 'सेरो सर्भिलेन्स' गरेको भए चाहिँ कति मानिस संक्रमित भयो भनेर अनुमान गर्न सकिन्थ्यो।'
अर्को अहिले धेरै मानिसहरूले खोप लगाएकाले पनि संक्रमण तीव्र फैलिन नपाएको डा. पुनको भनाइ छ।
उनले कम्तीमा एक डोज भए पनि धेरै मानिसहरूले खोप लगाएको भन्दै ती व्यक्तिहरूमा संक्रमण हुने सम्भावना निकै न्यून रहेको उनी बताउँछन्। त्यसैले जतिसक्दो छिटो धेरै मानिसहरूलाई खोप लगाउन पुनको सुझाव छ।
'हुन त खोप लगाएका मानिसहरू पनि संक्रमित हुनसक्छन्। तर संक्रमित भए पनि उनीहरूमा जटिलता निम्तिने सम्भावना न्यून हुन्छ। त्यसैले खोप छिटोछिटो लगाउनुपर्छ,' उनले भने।
तर संक्रमण दर विस्तारै घट्दै गएको देखिए पनि अबका दिन कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले कति खोप लगाउन सक्छौं भन्ने कुराले भर पर्ने डा. पुन बताउँछन्।
उनले संक्रमण दर घटे पनि जोखिम सधैं रहिरहने भन्दै भोलिको दिन खराब स्थिति नझेल्नका लागि अहिल्यै नै खोपलाई जतिसक्दो चाँडो व्यापक बनाउनुपर्ने उनको जोड छ।
'अहिले संक्रमण दर घटेको देखिएको छ। अब भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कति खोप लगाउँछौं भन्ने कुरामा भर पर्छ। यदि धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई खोप लगाउन सक्यौं भने तत्काल खतरा अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने स्थिति देखिँदैन,' उनी भन्छन्, 'भोलि अहिले भएको भेरियन्ट उत्परिवर्तित भएर नयाँ भेरियन्ट फैलियो भने बेग्लै कुरा हो तर खोप पर्याप्त लगाउन सकियो भने दोस्रो लहरजस्तो भयावह अवस्था हुने सम्भावना कम देखिन्छ।'
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ८, २०७८, १७:२५:००